Booliska UK oo lacag dul dhigay madaxa Nin Somali Britisha - Idman news
Booliska UK oo lacag dul dhigay madaxa Nin Somali Britisha
Booliska UK ayaa madaxiisa dul dhigay lacag muwaadin Somali British ah oo labo sano ah baadi goob loogu jiray, kaasoo lala xiriiriyay dil ka dhacay magaalada Cleethorpes.
Abdi Ali oo leh magacyo kala duwan sida Madman, Madders ama Gulaid ayaa lala xiriiriyay inuu qeyb ku lahaa dil 2018 lagu khaarijiyay Shaun Lyall, 47-jir, meydkiisana laga dhex-helay guri uu ku noolaa bishii July, 2018-kii. Ciidamada booliskana waxay xaqiijiyeen in jirkiisa ay ka muuqdeen dhaawacyo gaaraya 170.
Kiiskan waxaa horey xabsi daa’in loogu xukumay Craig Whittle oo lagu waramay in ay fal-dambiyeedka isla geysteen, isla markana biqiyay xogta ku saabsan Abdi Ali.
Haddii gacanta lagu dhigo Abdi Ali ayaa wuxuu wajahi karaa xabsi daa’in cimrigaa haku furto ah.
Muwaadinkaan Somali Britishka ah ayaa wuxuu ka tirsan yahay koox dilaayaal ah isla markaana derogadaSaxaafadda Britain ayaa warisay in Cabdi Cali uu ka tirsan yahay koox burcad ah oo ciidamadda Cleethorpes aad u doon-doonayaan.
Fal-dambiyeedyadda ay kamid yihiin dhaca iyo dilalka loo adeegsado Tooreyda ayaa ku badan gudaha Ingiriiska, iyaddoo qaarkood ay ku lug-yeeshaan dhalinyaro Soomaali ah, kuwaasoo xukuno culus lagu rido
Previous DEG DEG: MD Farmaajo oo ka farxiyey Reer Muqdisho & DFS oo Dagaal Xoogan qaadeysa kadib…
Next Duqa Muqdisho oo guddoomiye degmo u magacaabay Wariye caan ah